New fianarana dia mampibaribary pandà mamy nify - News Fitsipika
New fianarana dia mampibaribary pandà mamy nify
Ao anatin'ny jamba tsiro fitsapana, valo amin'ny valo pandas manaiky — siramamy dia matsiro.
Ao amin'ny fandinihana vaovao avy Alarobia, mpahay siansa mametraka ny pandà tsirony mpandray ny fitsapana, manontany tena raha ny cuddly critters fa na dia mahita ny maha samy hafa ny tani-hay ny rano sy ny mamy zavatra.
“ankapobeny, biby izay mihinana zavamaniry manana tsiro mamy receptor satria izay manome fahafahana azy ireo mba mamantatra siramamy, izay eo amin'ny zavamaniry izay loharanom-kaloria,” Nanazava Gary Beauchamp, mpitantana ny Monell Center izay nitondra ny fikarohana.
Fa tsy toy ny ankamaroan'ny herbivores, pandas mifikitra amin'ny iray fototra — volotsangana — izay malaza amin'ny siramamy kely.
Dia nanontany tena raha ny mpikaroka — toy ny maro mpihinana nofom-biby, anisan'izany ny saka — pandas Very ny fahaizany mamantatra mamy.
Koa satria carnivores “tsy mihinana zavamaniry, tsy hifandray siramamy, tsy misy intsony ny tsindry ho azy ireo mba hihazonana ny mamy receptor Functional,” Beauchamp nilaza AFP.
Ny teoria dia hoe bararata-munching pandas, izay ihany koa toa tsy ho hita ho be siramamy, mety koa ho very ny fahaizany tsirony mamy.
Deutsch: Goavam-be pandà in Ocean Park, Hong Kong (sary: Wikipedia)
Saingy Hay pandas, toy ny hafa herbivores, mbola ho tsara-miala mamy nify.
Rehefa nomena boriboriny roa rano, ny iray mamy ary ny iray tsy, ny valo pandas eran slurped nidina ny sugary breo.
Ny mpikaroka nizaha toetra isan-karazany ny siramamy, anisan'izany ny fructose, gliokaozy, sucrose, lactose, maltose, ary galactose. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny zava-pisotro mamy dia nisafidy, ary indrindra fa ireo amin'ny fructose sy sucrose, izay olona hahita toy mamy indrindra.
Ny mpahay siansa ihany koa ny nampiasa finday fanadihadiana hitokantokana mamy receptor sela avy amin'ny pandas ary dia afaka mampiseho izy ireo namaly siramamy.
Izy ireo pandas manombantombana mba hanao ny mba miasa mamy receptor sela, satria, lafin-javatra any an-dafin'ny ny fanandramana, mba ho ampiasaina amin'ny toerana toy ny sarakaty sy ny esory tsara ny taovany mba hanampy tamin'ny fototra kanina.
Fa raha pandas tia zava-mamy, Nahoana no izy ireo ihany no mihinana volotsangana?
In babo, pandas no mankafy sakafo mamy — anisan'izany ny vaovao Washington pandà Cub Bao Bao, izay “dia toa relishing vomanga toy ny sakafo voalohany nandritra ny fisaraha-nono,” nanao hoe: Danielle Reed, izay nanoratra ny taratasy nivoaka tao amin'ny gazety PLOS ONE.
Fa pandas be koa dia mila ny volotsangana, na izy ireo marary. Petra-kevitra iray dia ny reedy zavamaniry manome zavatra ilaina, dia mino ny evolisiona tsindry no nitarika azy ireo mba hiantehitra fotsiny amin'ny ny fototra.
Na hoe rehefa pitsapana, Beauchamp hoy, dia ho an'ny pandas, volotsangana raha ny marina ny tsirony toy ny vatomamy.
Sady koa anie, misy teny porofo biby samihafa traikefa sakafo fomba hafa — toy ny solon-sweeteners, izay, fa pandas biby sy ny maro hafa, tsy mba hanandrana mamy.
Ity lahatsoratra ity, New fianarana dia mampibaribary pandà mamy nify, dia mpilaza vaovao avy amin'ny AFP, ary dia nandefa eto nahazoana alalana. Copyright 2014 AFP. Zo rehetra voatokana
23505	0 Bao Bao, Shina, Danielle Reed, sakafo, Gary Beauchamp, Giant pandà, Sugar, Washington
← Ramps Twitter ny sary fizarana endri-javatra Fahatsiarovana ny mpandeha nifindra sambo MH 370 →